Sadio Mane oo isbitaalka loo qaaday kaddib jug xun oo kasoo gaartay ciyaartii uu xalay xulkiisa Senegal garaacay Cape Verde – Gool FM
Ahmed Nur January 26, 2022
(Cameroon) 26 Jan 2022. Laacibka kooxda Liverpool ee Sadio Mane ayaa la sheegay in la geeyay isbitaal kaddib markii ay isku dhaceen goolhayaha xulka qaranka Cape Verde ee Vozinha.
Mane ayaa kaddib markii isbitaalka la geeyay sheegay inuu wanaagsan yahay inkastoo ay madaxa jug kasoo gaartay markii uu kubbad sare kula loolammay Goolhaye Vozinha oo casaan lagu siiyay khaladkaas.
Si kastaba ha ahaatee, weeraryahanka Reds ayaa guul ka saaciday xulkiisa Senegal isagoo goolka koowaad dhaliyay ciyaar ay 2-0 ugu gudbeen wareegga siddeed-dhammaadka tartanka qarammada qaaradda Afrika.
Barta rasmiga ah ee uu tartanka Africa Cup of Nations ku leeyahay Twitter-ka ayaa lasoo dhigay sawirka goolhaya Cape Verde oo isbitaalka ku booqday Mane, halka 29-sano Liverpool ka tirsan uu isna qoraal kula wadaagay 1.9-ka milyan ee ku xiran bartiisa Instagram inuu wanaagsan yahay isagoo uga mahad celiyay fariimahooda.
RASMI: Martial oo dhammeystiray heshiiska amaahda ah ee uu ugu biiray naadiga Sevilla & Qodobbada ugu muhiimsan heshiiska oo daaha laga rogay
Man City oo Dhammeystirtay saxiixa xiddig bartilmaameed u ahaa Man United iyo Liverpool... (Ogow qiimaha ay kula wareegeyso iyo xilliga uu Etihad imaanayo)